vitsika, sombin-javatra mats - China Luoxi Plastic entana orinasa
36-SQFT Giant Play Mat 9-kapila tanimanga Excise Mat Easy Setup ...
EVA sombin-javatra Puzzle Mat EVA sombin-javatra vitsika, Floor Mats ...
Wood Grain Floor Mat 3/8 matevina mirefy Interlockin sombin-javatra ...
Puzzle Manaova ny sombin-javatra EVA Mat amin'ny vitsika, taila
vitsika, sombin-javatra mats
ZAZAKELY CARE Large Baby Play Mat
Kids Carpet Play fandrianao
2 lafiny ara-nofo XPE fampiasana zaza kilalao fandrianao
Eva piozila fandrianao
araka ny mpanjifa
sarimihetsika nofonosina, baoritra
300000 Piece / Pieces isam-bolana
Insert sarimihetsika nofonosina amin'ny karatra, dia ho feno ao anatin'ny baoritra
ao anatin'ny 10-35 andro aorian'ny fandraisana ny petra-bola
Eva sombin-javatra Mat:
2, Non-poizina, fihenjanan'ny resaoro avo
3, tsara fihenjanan'ny resaoro, no lasa SGS sy ISO14001, hihaona Ul koa.
Ny EVA Mat Character:
1, rano fanoherana: famehezana sombin-javatra rafitra, tsy absorbent, porofo mando, tsara fanoherana ny rano.
2, harafesiny fanoherana: Mba hisorohana ny harafesiny simika, toy ny ranomasina ny rano, menaka, asidra, alkali sy ny sisa.
3, Processability: tsy mpiray, dia mora ny mafana maika, fanapahana, coating sy hifanaraka tsara.
4, Shockproof: Misy ny niatrika an'izany tsara, avo sy tsara mikasika ny Fahasarotana buffer miasa.
5, Heat fiarovana: Tsara insulation, hatsiaka sy hafanana ambany fanoherana.
6, fiarovana ny tontolo iainana: Tsy misy fofona hafahafa sy ny tsy fandotoana.
Endri-javatra ny mats
1. firaka maimaim-poana, formamide maimaim-poana, tsy misy poizina, tsy misy ny filaminana, ny tontolo iainana ara-nofo EVA
2. tantera-drano, anti-taratasy kely
3. mora ny madio, fametrahana sy hetsika
Certificate ny SGS
1. ve ianao, na ara-barotra manufactory orinasa?
A: manufactory izahay amin'ny OEM / ODM fanompoana.
2. no Hataoko fa santionany vitsivitsy maimaim-poana?
A: Eny. FREE santionany tsy ampy, afa-tsy ny saran'ny entana dia nandoa ny mpividy.
3. no Hataoko ampanjifaina ny ny vokatra?
A: Eny, faly izahay handray ny ampanjifaina fangatahana, ny loko, endrika, halebeazana, hamafin, vary fanontam-pirinty, 3D patterning, fahaiza-manaony sy ny asa; Mandritra izany fotoana izany ny MOQ tokony hodinihina.
4. Nanao ahoana ny fomba fandoavam-bola izay atolotra?
5. Ahoana ny fomba amam-panao Import saran'ny?
A: Mba mihaino: ny varotra Hilaza zava-fomba amam-panao sarobidy ho mpanjifa mitaky ara-dalàna. Import adidy, ny hetra sy ny fiampangana dia tsy tafiditra ao ilay zavatra na ny vidin'ny fandefasana. Amin'izany zavatra izany no mpividy 'andraikitra. Anontanio ny firenena fanao birao mba hamaritana ny zavatra ireo vola lany fanampiny ho alohan'ny hividy. Raha toa ny entana dia hiverina na tsy afaka ringana noho ny fomba amam-panao-fangatahany fahazoan-dalana, ny mifandray vola aloa ho amin'ny mpanjifa.
6. Ahoana no fanaraha-maso ny kalitao?
Manana ekipa matihanina QC, dia hifehy ny fananana toetra nandritra ny Lamesa famokarana rehetra, ary afaka manao fandinihana fanompoana ho anao. Hiezaka izahay ny tsara indrindra mba hanampiana ny mpanjifa rehefa nitranga olana.
7. Afaka no mamaritra ho antsika?
Manana ekipa matihanina mpamorona mba hanampiana ny mpanjifa no famolavolana ny asa.
Previous: Baby Care Play Mat (Large, Be Atao Farm)
Next: sombin-javatra piozila fandrianao
Fanabeazana Baby Play Mat
Nahatsapa Play Mat
Japana Kids Play Mat
Winnie Ny Pooh Play Mat
Eva sombin-javatra vitsika, taila Protective Flooring ...
Fiainana Soft Play Mats for Kids EVA sombin-javatra Mats
plastika rihana fandrianao
Baby mandady milalao fandrianao
Wood Grain Floor Mat 3/8-mirefy matevina Interl sombin-javatra ...